ရန်ကုန် မုန့်ဟင်းခါး (အိုးဘဲဥ) | Wutyee Food House
oh i really miss mont hninn kar…yesterday ka top ready made eat tae tal…but not that good like fresh one…yangon pyan lar ma baeawa eat top mal 😀
ငါမုန့်ဟင်းခါး လက်ရာ ကိုယ်ပြန်လာမှ လက်စွမ်းပြရမယ်.. 🙂
မ၀တ်ရည်…..အုန်းနို့ ခေါက်ဆွဲ ချက်နည်းလေး တင်ပေးပါ နော်…
Could u tell me how to skin of cat fish?
ငါးခူးကို ငံပြာရည်၊ ဆနွင်းမှုန့်၊ စပါးလင် ရေနည်းနည်းဖြင့် ပြုတ်ပြီရင် ငါးခူးအသားကျက်လည်း ကျက်နေပြီမို့ ငါးခူးအရေခွံတွေ အလွယ်တကူ ခွာလို့ရပါတယ်။ ပြုတ်ပြီမှ ခွာတာပါ.. ပြီလျှင် အရိုးဖယ်ပြီ အသားကို နွင်းလိုက်ရုံပါပဲ။ 🙂
ဆိုင်မှာ စားတုန်း ဟင်းရည်ပြတ်ပါတယ်..ဆိုင်ရှင်မိန်းမက ပူညံပူညံလုပ်ပီး…ခွဲထားတဲ့ ဟင်း
ရေ လောင်းထည့်ပါတယ်..နောက် အချိုမှုန့်ကို အထုတ်ကြီး တစ်ဝက်လောက် သွန်ချလိုက်တယ်…..မီးပြင်းတိုက်….ထပ်ရောင်းတယ်…
အပြင်မှာ ရောင်းတဲ့ မုန့်ဟင်းခါးများ ၀ယ်မစားတာ ကောင်းလိမ့်မယ်…
ဟုတ်တယ်။ ၀တ်ရည်လည်း အပြင်က မုန့်ဟင်းခါးဆို မစားသလောက်ပဲ။ သူတို့သုံးတဲ့ ငံပြာရည်ကလည်း မကောင်းဘူး၊ အချိုမှုန့် အရသာပဲ ရတယ်။ မုန့်ဟင်းခါး အရသာကို မရတာ။ ဒါကြောင့် အိမ်မှာပဲ ကိုယ်တိုင် လုပ်စားဖြစ်သွားတာ။ အားရင်လည်း လုပ်စားကြည့်ပါနော်… 😀
ဖြစ်သလို လုပ်တတ်တဲ့ မြန်မာ့အလေ့အကျင့်တွေကို သွေဖီပြီး အွန်လိုင်းမှာ စံနစ်တကျ
လုပ်နည်းလုပ်ဟန်ပါ တင်ပြတဲ့ မ၀တ်ရည်ကို အထူးကျေးဇူး တင်ပါတယ်ဗျာ…
၀တ်ရည်ကလည်း ကျေးဇူးပါနော်.. 🙂
Jonathan Sang says:
zar ga lone says:
why you told like that? i think u are so stupid.
ဆန်မှုန့် ပဲမှုန့် များဈေးက ၀ယ်လျှင် လုံးဝ မစစ်ပါ။ပဲမှုန့်များ ပိုဆိုးပါတယ်။ကုလားပဲလုံးဝ မစစ်သလို ပဲအစုံ ရောကြိတ်ထားတာပါ။အစစ်စားလိုသူများ ကုလားပဲအစစ်လှော်ပြီး ကြိတ်
ပါ။မြန်မာအစားအသောက် များရဲ့အားနည်းချက်သည် ဖြစ်သလို လုပ်ပီး အင်ထုတတ်ခြင်း
ဖြစ်ပါသည်။။မ၀တ်ရည်ရဲ့ ချက်နည်းများ စံနစ်ကျခြင်း ပစ္စည်းများ အစစ်ဖြစ်ခြင်း များအတွက် ကျေးဇူးပါ။
ပဲမှုန့်က မစစ်တဲ့အပြင် ကြိတ်ပြီသား ပဲမှုန့်ကို မုန့်ဟင်းခါးထဲ ထည့်ရင် ဖွယ်ဖွယ်ကြီး ဖြစ်သွားပြီ မုန့်ဟင်းခါးက စားလို့ သိပ်မကောင်းဘူး။ ဒါကြောင့် ၀တ်ရည်က ကုလားပဲကို ပြုတ်ပြီမှ ပြန်ကြိတ်ပြီ ထည့်သုံးထားတာပါ။ Thanks also 🙂
ငါးခူရှာလို့ခက်တာရယ် ငှက်ပျောအူလုံးဝမရှိတာရယ်နဲ့ ရယ်ဒီမိတ်အထုတ်တွေပဲ ချက်စားနေရပါတယ်..
မခင်ယမုံ အနားမှာ ရှိရင် တကယ်ချက်ကျွေးချင်တာ… နိုင်ငံခြားမှက ငှက်ပျောအူ ရှာမရတဲ့ ပြသာနာက ဆိုးသားနော်… အမြဲအားပေးလို့ ၀တ်ရည်ကလည်း မခင်ယမုံကို အထူးကျေးဇူးပါ.. 😛
So, it is true. But sometimes found in dry Asian trade.
chaw myat sandar says:
Want to eat so much……
စားသွားပါ.. sis yay.. 🙂
အချိန်ကုန်-ငွေကုန်-လူပင်ပန်း ချက်ချင်စမ်းချင်တဲ့ ၀ါသနာ ၀ဋ်ကြွေးကပါလာတော့ လဲ မနေနိုင်ဘူး-ပြီးရင် ပန်းကန်တွေအိုးတွေကဆေးရသေးတယ်။ကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်း ကောင်းတယ်လို့ပြောတာ နဲ့ပဲ နောက်တစ်ခေါက် က ချက်စမ်းဖို့ ဖြစ်ပြန်ရော–ခုလဲ တင်ထားတဲ့လူကတင်ထားတော့ စမ်းရဦးမယ်–စိတ်ပဲဆိုးရမလို–ကျေးဇူးပဲတင်ရမလို–ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျား
hee ၀တ်ရည်နဲ့ ၀ါသနာချင်းတူ တစ်ယောက် တွေ့ပြီ.. ကျေးဇူး.. 😀
မုန့်ဟင်းခါးရနံ့လေး နှာဝမှာ မွှေးလာသလိုတောင် ခံစားမိတယ် ၀တ်ရည်ရေ…။
hee Thanksalot မမြသွေးနီ။ မကို အနီးမှာ ရှိရင် တကယ်ကျွေးချင်တာ.. 😛
တစ်ပွဲလောက် အိုးဘဲဥလေးနဲ့ ကျွေးပါနော်
ရန်ကုန်ရောက်တုန်း မုန့်ဟင်းခါးလေးတောင် စားချိန်မရလိုက်ခဲ့ဘူး
တော်သေး .. တီတင့်ဆီက နန်းကြီးသုပ်လေး စားလိုက်ရသေးလို့း)
မချော အများကြီး စားသွားပါနော်.. အိုးဘဲဥတပွဲခုပဲ ပါဆယ်ထုတ်ပြီ ရွှေလီကို အမြန်ချောပို့နဲ့ ပို့ပေးလိုက်ပြီ.. 🙂 ဟုတ်ပ အန်တီတင့် နန်းကြီးသုတ် အရမ်းစားလို့ကောင်း.. 🙂
ရမယ် မမြတ်။ အိုးဘဲဥနဲ့ တပွဲ ရှယ်ပို့ပေးလိုက်ပြီနော်… 🙂
တို့သိတဲ့ ချက်နည်းထက်တောင်မှ ပိုကောင်းသေးတယ်
ဟုတ်ကဲ့ ချက်ပြီရင်လည်း အဆင်ပြေ၊ မပြေလေ ပြန်ပြောပေးပါနော်.. အဆင်ပြေရင်တော့ ၀တ်ရည်ကိုလည်း ကျွေးပေါ့.. Just kidding. 🙂
ချက်နည်းကို အပေါ်မှာ ရေးထားပေးပါတယ်.. 🙂
အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲနဲ့စားတဲ့ ပဲသွေးလုပ်နည်းလေးသိရင် တင်ပေးပါလား
ပဲသွေးလုပ်နည်းတော့ သိဘူး.. 🙂
ကျေးဇူး ..ပါ အိုးဘဲဥ က ဘယ် လို လုပ် ရပါသလဲရှင်
ပြုတ်ပြီသား ဘဲဥတွေကို အခွံနွာပြီ မုန့်ဟင်းခါး ချခါနီးမှ ထည့်ပြီ ချက်ရတာပါ.. 🙂
လာလည်သွားပါတယ် ခင်ဗျာ . . . မုန့် ဟင်းခါး ဆိုတာ ကျတော် အကြိုက်ဆုံး အစားအစာပါပဲ။ အခုလို ချက်နည်းပြုတ်နည်း Website ကို မြန်မာဘာသာ နဲ့မြင်ရမယ် လို့ တစ်ခါမှ မတွေးခဲ့မိဖူးပါ။ စိတ်ကူးအရမ်းကောင်းပါတယ်။ ကြိုးစားပါ အမ . . . အောင်မြင်ပါစေ
ရပါတယ် sis yay.. လုပ်စားကြည့်ပါအုန်းနော်.. 🙂
၀တ်ရည်ရေ သိပ်ကြိုက်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပါ
ဟုတ်ကဲ့ ၀တ်ရည်ကလည်း ကျေးဇူးးပါနော်
အစ်မရေကျေးဇူးပါ ညီမ ချစ်သူက မုန့်ဟင်းခါးကြိုက်တယ် သူစားချင်တာကို ကိုယ့်တိုင်ချက်ပေးချင်ပေမယ့် မချက်တတ်လို့လေ ခုတော့အစ်မဆီက ကူးထားလိုက်တယ် သူပြန်လာရင်ချက်ကျွေးလိုက်မယ် အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အစ်မ
It’s looks so delicious..never boring to eat this.
trader beggar chef says:
Looking good, Sis. Any plan to post the recipe of Myike Moke Hin Gar?
ကိုကြီးရေ။ မီးမီး မြိတ်မုန့်ဟင်းခါးချက်နည်း http://www.wutyeefoodhouse.com/?p=2501/ တင်ထားတယ်။ အန်တီမြတ် လက်ရာ… 🙂
ငရုတ်ရောင် ဆီလည်း မများပါဘူး။ ဒီချက်နည်းက ၀တ်ရည် အဒေါ် ချက်နည်းနည်းအတိုင်း ချက်ထားတာပါ။ အဒေါ် ရန်ကုန်မုန့်ဟင်းခါးချက်နည်းက နံမည်ကြီးပါ။ အရင်ကဆို အဒေါ်က မုန့်ဟင်းခါး အော်ဒါတွေပါ လက်ခံရတာ၊ ကောင်းလွန်းလို့။ အပြင်ဆိုင်တွေ တူတာထက် ပိုကောင်းဖို့ အရေးကြီးတယ် ထင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပါ…
မုန်ဟင်းခါးချက်နည်းကို ရှာရင်းနဲ့ ညီမတင်ထားတာကိုတွေ့ လို့ ဖတ်ဖြစ်သွားတယ်။ကျေးဇူ တင်တယ်နော်။အစ်မက လုံးဝကိုမချက်ဘူးဘူး။အရမ်းစားချင်နေတာ။ညီမလေးချက်ပြီးတင်ထားတာကို ကြည့်ပြီး ပိုတောင်စားချင်မိတယ်။ဒီမှာက မစားရဘူး။ငှက်ပျောအူတော့ မရနိုင်ဘူးထင်တယ်။ဒါပေမဲ့ ညီမလေးရေးထားတဲ့ အတိုင်း ချက်ကြည့် အုံးမယ်။မုန့် ဟင်းခါးကို အရမ်းကြိုက်တာ။ဝေးနေတာ ကြာပြီလေ။ကျေးဇူ နော်
လုပ်စားကြည့်ပါနော်။ ဌက်ပျောအူမပါပေမယ့် စားလို့ကောင်းမှာပါ။ 🙂
အစ်မရေ ဆန်လှော်မှုန့်မရရင်ဘယ်လိုလုပ်ချက်ရမလဲဆိုတာလေးသိချင်ပါတယ် ဆန်လှော်မှုန့်ကိုဘယ်လိုအစားထိုးလုပ်လ်လုပ်လို့ရလဲ
ကျွှန်တော် မနက်တိုင်းစားဖြစ်တဲ့ အစားအစာလေးပေါ့ အခုလိုအပ်တာတွေထပ်ဖြည့်ခွင့်ရတဲ့ အတွက်
လုပ်စားကြည့်ပါနော်။ အရမ်းစားကောင်းပါတယ်.. 🙂
မမမုန့်ဟင်းခါးကရှယ်ပဲ… ညီမပဲကြော်ကော် အိုးဘဲဥကော်
i m interested in cooking n yr cooking method
[…] ရန်ကုန် မုန့်ဟင်းခါး အိုးဘဲဥ […]
Welcome sis! 🙂
sis ရေ…. ပဲကြော်လုပ်နည်းလေးပြောပြပါဦးနော်… ကျေးဇူးပဲ sis ရေ… 🙂
ဟုတ်ကဲ့ ကြိုးစားပြီ တင်ပေးမယ်နော်
Khine Wint says:
I will try to post later
ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ရပါစေနော်.. 😉
ဗိုက်ဆာတဲ့အချိန်မှာ ဒီမုန့်ဟင်းးခါး မြင်ရတယ်လို့ကွာ…. ဟွန့်
ဒီအပတ်ပိတ်ရက် မုန့်ဟင်းခါး ချက်စားဦးမယ် မ၀တ်ရည်ရေ …
မနေနိုင်မထိုင်နိုင် ဟင်းချက်နည်းတွေ အစားအသောက်တွေကို အပင်ပန်းခံပီး လက်တည့်စမ်းချင်တဲ့ ၀ါသနာကလည်း
ဟုတ်ကဲ့ sis ကြိုးစားပြီ တင်ပေးပါ့မယ်…
Very glad you like it sis.. 😀
ရှေ့လ ပိတ်ရက်မှာ မုန့်ဟင်းခါး ချက်စားမယ်လို့ စဉ်းစားနေမိတာနဲ့ အတော်ပဲ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မ၀တ်ရည်။နောက်တော့ စမ်းချက်ကြည့်မယ်နော်။
ဆန်လှော်မှုန့်မရှိရင် တခြားဘာအမှုန့်ထည့်လို့ ရပါသလဲ။ ကိုယ်တိုင်ဆန်လှော်မှုန့် ကို ဆန်ရှိရင်လုပ်လို့ ရပါသလား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Tada Ice says:
အမ တချို့ဟင်းရည်​​​တွေက ချွှဲချွှဲ​လေး ဘာထည့်​လည်းမသိဘူး​နော်​
ခိူ ခိူ says:
တပိသာ ဆိုတော့ဟင်းရည် ဘယ်နစ်ပွဲ လောက် ရနိုင်လဲ အမ ……ချက်ရောင်းရင် အမြတ် ကျန် နိင် မလား
ညီမလေး ** ၀တ်ရည်
Can’t read the font? 😥 what can I do?